ဒါဟာ ယင်းကျယ်ပြန့်လူကြိုက်များတစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ဆုကြေးငွေ Blackjack ကတီထွင်မူကွဲ လက်တွေ့ကျကျအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဒါဟာအမှန်တကယ်နှစ်ခုစားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းများကိုပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည် - Blackjack နှင့်သုံးကဒ်ဖဲချပ်ဝေ. ဒါဟာအပေါငျးတို့သစံဂိမ်းကမ်းလှမ်း အခမဲ့ဆုကြေးငွေ Blackjack တစ်ဖဲချပ်ဝေလက်လုပ်နေတဲ့အခြမ်းလောင်းဖို့ option ကိုနှင့်အတူ. ဒါဟာအမေရိကန် Blackjack စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရသိရသည်ကစားများနှင့်ဤအရပ်မှ Blackjack များအတွက်ကုန်သည်စစ်ဆေးမှုများဖြစ်ပါတယ်, ဥရောပ Blackjack အတွက်မတူပဲ. ဥရောပ Blackjack ကျော်အားသာချက်ဖဲဝေ Blackjack စေသည်လျှင်ကြောင့်, သငျသညျကိုသာနှစ်ချက်ကိုစူးသင်၏မူရင်းလောင်းကြေးဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်.
ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကုန်သည်ရဲ့ပထမဆုံးကဒ်နှင့်အတူကစားသမားရဲ့ပထမနှင့်ဒုတိယကတ်များပေါင်းစပ်ရတဲ့ကဖဲချပ်ဝေလက်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်. ခြေရင်းဂိမ်းအတွက်ခွင့်ပြုနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေးများမှာ $1 နှင့် $2000 လိုအပ်သလို. ဘေးထွက်ကစားနည်းတစ်ခုအနည်းဆုံးကနေကွဲပြား $1 ဦးရေအများဆုံးမှ $200.
ဒါဟာနှင့်အတူကစားသည်ကို6၏ကုန်းပတ် 52 ကတ်များ.
ကားရောင်းဝယ်ရေးအားလုံး 17s အပေါ်ရပ်တည်.
သငျသညျကို double ချပြီးနောက်တစ်ဦးအပိုဆောင်းကဒ်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်.
splitting တစ်ခါသာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, အေ့စ်အပါအဝင်.
စံတော်ချိန် - 1:1
အာမခံ - 2:1
ဤ အခမဲ့ဆုကြေးငွေ Blackjack အထိတစ် payback ကမ်းလှမ်း 99.63% အခြေခံကစားနည်းအပေါ်.
ဒပေးသောပေါင်းစပ်အတွက် flush3တူညီဝတ်စုံကို၏ကတ်များ. ပေးချေမှုအချိုးအစားဖြစ်ပါသည် 5:1.
ဖြောင့်သော3ရောထွေးဝတ်စုံ၏ဆက်တိုက်ရာထူး၏ကတ်များ. ပေးချေမှုအချိုးအစားဖြစ်ပါသည် 10:1.
အရာတစ်မျိုး၏သုံး3အဆိုပါရောနှောဝတ်စုံ၏ပေမယ့်တူညီတဲ့ရာထူးနှင့်အတူကတ်များ. ပေးချေမှုအချိုးအစားဖြစ်ပါသည် 25:1.
သောဖြောင့် flush3တူညီဝတ်စုံကို၏ဆက်တိုက်ရာထူး၏ကတ်များ. ပေးချေမှုအချိုးအစားဖြစ်ပါသည် 40:1.
ဝတ်စုံ3အရာတစ်မျိုး၏3တူညီဝတ်စုံကို၏တူညီသောရာထူးနှင့်အတူကတ်များ. ပေးချေမှုအချိုးအစားဖြစ်ပါသည် 100:1.
သည် Blackjack ကကမ်းလှမ်းဘေးထွက်အလောင်းအစားလေးသာမှု 92.86%.
ဒီဂိမ်း အလွန်ချောမွေ့နှင့်နားလည်ရန်လွယ်ကူသောအရာတစ်ခု interface ကိုကမ်းလှမ်း. ဒီ၏ဂိမ်း အခမဲ့ဆုကြေးငွေ Blackjack အဆိုပါကစားသမားကိုပိုပြီးပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာအလွန်ချောမွေ့စွာထုံးစံ၌ရရှိသော. အဆိုပါ 2-in-1 ကစားပွဲအခြေခံကစားနည်းအပြင်ဘေးထွက်ကစားနည်းအားမရသဖြင့်ကြီးမားသောပေးချေမှုဝင်ငွေအလားအလာနှင့်အတူသငျသညျကိုထောက်ပံ့ပေး. အဓိကကစားနည်း၏အမှု၌အိမျတျောကိုအစွန်းဖြစ်ပါသည် 0.41% ထိုသို့နေစဉ် 4.62% ဘေးထွက်ကစားနည်း၏အမှု၌. ဤ အခမဲ့ဆုကြေးငွေ Blackjack ကျိန်းသေပုဖို့အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်တစ်ခုဖြစ်သည် 21+3 Blackjack မူကွဲ.